Dadweeynaha Soomaaliyeed oo soo dhaweeyay heshiiskii dhexmaray Dowlada K.M.G.ah iyo Ahlu sunna waljamaaca. | WHEELIYE.COM
Dadweeynaha Soomaaliyeed oo soo dhaweeyay heshiiskii dhexmaray Dowlada K.M.G.ah iyo Ahlu sunna waljamaaca.
Dadweeynaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan Magaalada Muqdisho ayaa soo dhaweeyay heshiiskii magaalada Adiss ababa ay ku kala saxiixdeen Dowlada KMG ah iyo Culumaa’udiinka Ahlu sunna Waljamaaca.
Qaar ka mid ah dadkaasi oo u waramayaywarbaahinta Muqdisho ayaa waxa ay soo dhaweeyeen heshiiska dowladda KMG ee Soomaaliya iyo Culuma’udiinka Ahlu sunna waljameeca ay ku saxiixdeen magaalada Addiss ababa ee xarunta dalkaasi itoobiya.
Dadka ayaa heshiiskaasi ku tilmaamay guul u soo hoyatay shacabka Soomaaliyeed isla markaana uu gacan ka geysan karto xal u helida xiisadaha colaadeed ee ka oogan Soomaaliya iyo dagaalada ay kula jiraan maleeshiyaadka dowladda ka soo horjeeda.
Haddaba dadweeynaha Soomaaliyeed oo ka soo daalay Dagaalada aan dhamaadka laheyn ee ka ogan gudaha dalka Soomaaliya ayaa muujiyay sida ay ugu ooman yihiin nabadgelyo ka aslaaxda dalka Soomaaliya, sidaasi darteedna waxa ay cadeeyeen in ay taageero hiil iyo hoo ah ay la garab taaganyihiin Dowlada KMG ah iyo heshiiska ay la gashay culumaa’udiinka Ahlu sunna waljamaaca.
Arintani ayaa ka danbeysay kadib markii dhawaan ay heshiis ku kala saxiixdeen magaalada Adiss ababa dowlada KMG ah ee Soomaaliya iyo Culuma’udiinka Ahlu sunna wal jamaaca iyadoo sidoo kale heshiiskaasi laga soo dhaweeyay Gobolada dhexe ee dalka iyadoo dibad baxyo lagu taageerayay heshiiskaasi uu ka dhacay magaaliyiin ay mid tahay Degmada Balanbal ee Gobolka Galgaduud.
Filed under: Dadweeynaha Soomaaliyeed oo soo dhaweeyay heshiiskii dhexmaray Dowlada K.M.G.ah iyo Ahlu sunna waljamaaca. |
« Hees wadani ah Golaha Q.midoobay oo kulan eey albaada u xiranyihin ka yeshay warbixin eey soo saren dhawan gudiga dabagalka Qaramada Mioodbay ee arimaha Soomaaliy »